လင်မယား အသစ်စက်စက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း – PoPinVdo
လင်မယား အသစ်စက်စက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း
March 3, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)အချစ်​+ရသNo Comment on လင်မယား အသစ်စက်စက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း
လင်မယားအသစ်စက်စက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးညကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း (စိုင်းထီးဆိုင်)
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်တို့အဖေ ဖွင့်တဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ စိတ်ထဲ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်ရတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ် ရှိတယ် … ဦးစိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ … အပြာရောင်မျက်ရည်တဲ့ …
♪♪♪ … ရှိတဝက်ပျက်တဝက် နှစ်ဖက်သောပါးပြင်ပေါ်မှာ လိမ်းတဲ့ သနပ်ခါး ကွက်ကျန်လို့နေ
တစ်လိမ့်ချင်းလိမ့်လို့ စီးဆင်းကျလာရာလမ်း မြစ်နှစ်သွယ်လိုပဲ ထင်ကျန်နေ
စီးပါလေစေ ချစ်သူရေ မသုတ်လိုက်နဲ့ အပြာရောင်လေး ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့ တကယ်လှနေ… ♪♪♪
အဲ့စာသားနားထောင်ရင်း စဉ်းစားတယ် .. ဒီလူက လူဆိုးကြီးများလား … ရက်စက်ချက်ကလည်း ကမ်းကုန်ပဲ … ကောင်မလေး မျက်ရည်ကျတာကို တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်ပြီး အရသာခံနေတယ်ပေါ့
… အဲဒါနဲ့ ဆက်နားထောင်ဖြစ်တယ် …
♪♪♪ …. တချက်တချက်ရှိုက်တဲ့မင်းငိုသံလေး ညသန်းကောင်တေးတစ်ပုဒ်လိုပဲလေ
ယဲ့ယဲ့ပြုံးတဲ့ မင်းရဲ့မျက်နှာမြင်တော့ အလှပန်းချီတစ်ချပ်အလား ထင်စရာပေ
စီးပါလေစေ ချစ်သူရေ မသုတ်လိုက်နဲ့ အပြာရောင်လေး ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့ တကယ်လှနေ …. ♪♪♪
ဟင် … ယဲ့ယဲ့ပြုံးသတဲ့ … ငိုနေရင်းက ဘာလို့ထပြုံးရတာလဲ … နှိပ်စက်လွန်လို့ ကြောက်ပြီးရူးများသွားလေသလားပဲ … အဲထားပါတော့လေ … ဆက်နားထောင်တယ် …
♪♪♪ … အပြာရောင်လေး အချစ်မျက်ရည် အပြာရောင်မျက်ရည် အချစ်သက်သေ
စိုခွင့်ရှိသူသာ စိုစေမယ် စိုစေမယ်
ပေါက္ခဝဿန မိုးလိုပြောတာ ဒါပဲဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့ စိတ်မှာစွဲနေ
လိုက်လျောခြင်းရဲ့အဆုံးစွန်းရောက်တဲ့ ခဏလေး တသက်မှာတစ်ခါပဲ ကြုံမယ်လေ
စီးပါလေစေ ချစ်သူရေ မသုတ်လိုက်နဲ့ အပြာရောင်လေး ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့ ယဉ်လို့နေ …. ♪♪♪
ငင့် .. ပေါက်ကရ မိုးတွေဘာတွေပါ ပါလာပြီ .. လိုက်မမီတော့ဘူး .. ဖေဖေ့ကို မေးကြည့်တော့လည်း ရယ်နေတယ် .. အဲလိုနဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ခုလုခုလုနဲ့
အဲလိုနဲ့ တက္ကသိုလ်တက်တော့ အဆောင်က ဦးလေးကြီး အဲဒီသီချင်းဆိုနေသံကြားလို့ ထပ်မေးကြည့်ဖြစ်တယ် … ဦးလေးကြီးက ရယ်ကျဲကျဲဖြစ်သွားတယ် …
– မင်းကြားဖူးမှာပေါ့ .. အပြာကားတို့ အပြာစာအုပ်တို့ …. အဲဒီအပြာရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိတယ်မဟုတ်လား …
– ဟုတ် .. ဟိုဟာ .. လူကြီးကိစ္စ
– အေး .. ဒီသီချင်းက အဲဒီကိစ္စပဲကွ … ကောင်မလေးရဲ့ ပထမဆုံးညမို့ ကျတဲ့မျက်ရည်လေ .. အပြာရောင်မျက်ရည်လို့ တင်စားထားတာ …
– သြော် ….
– ဒါနဲ့ ပေါက်ကရမိုးဆိုတာက …
– ပေါက္ခရ၀ဿမိုးပါကွာ … အဲဒါက ဘုရားရှင်လက်ထက်က တန်ခိုးတော်နဲ့ ရွာပေးတဲ့ စိုစေလိုသူစိုပြီး မစိုစေချင်တဲ့လူ မစိုတဲ့ မိုးကိုပြောတာ …
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီသီချင်းကို ပြန်နားထောင်ကြည့်တယ် … လခွမ်း .. ရေးချက်က အရမ်းချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ … အဓိပ္ပါယ်သိမှ ပိုပြီးသဘောကျသွားတယ် … ဖွဲ့နွဲ့တတ်ပုံများ …
နောက်မှ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတာ ဆိုတာ သိရတယ် … စာသားတွေက ချစ်စရာလေးဗျာ … ♪♪♪ လိုကလျောခြင်းရဲ့ အဆုံးစွန်ရောက်တဲ့တခဏလေး .. တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲကြုံမယ်လေ ♪♪♪ .. တဲ့ … ပေါက္ခရ၀ဿမိုး ဆိုတဲ့ တင်စားချက်လေးကိုလည်း သဘောကျမိတယ် … မိန်းကလေးစိုစေလိုသူအတွက် မိုးပေါ့ … နောက်ပြီး စိတ်ကူးထဲက လူယုတ်မာကြီးလည်း ပျောက်သွားတယ် … ပထမဆုံးညမို့ ငိုနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို တစိမ့်စိမ်နဲ့ ကြည့်ရင်း ချစ်မ၀တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ဦးဆိုတာပဲ စိတ်ထဲပေါ်လာတယ် … အဲ … သီချင်းဆုံးတော့ ပထမဆုံးဝင်လာတဲ့အတွေးက ၀မ်းနည်းစရာပဲ .. ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတုန်းက အပြာရောင်မျက်ရည်ဟာ ခုခေတ်မှာ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ တွေးလိုက်မိလို့ပါ …. 😀
လငျမယားအသဈစကျစကျရဲ့ မင်ျဂလာဦးညကို ကှငျးကှငျးကှကျကှကျ မွငျအောငျဆိုထားတဲ့ သီခငျြး (စိုငျးထီးဆိုငျ)
ကြှနျတျောတို့ငယျငယျက ကြှနျတျောတို့အဖေ ဖှငျ့တဲ့သီခငျြးတှထေဲမှာ စိတျထဲ ခိုးလိုးခုလု ဖွဈရတဲ့သီခငျြးတဈပုဒျ ရှိတယျ … ဦးစိုငျးထီးဆိုငျရဲ့ … အပွာရောငျမကျြရညျတဲ့ …
♪♪♪ … ရှိတဝကျပကျြတဝကျ နှဈဖကျသောပါးပွငျပျေါမှာ လိမျးတဲ့ သနပျခါး ကှကျကနျြလို့နေ
တဈလိမျ့ခငျြးလိမျ့လို့ စီးဆငျးကလြာရာလမျး မွဈနှဈသှယျလိုပဲ ထငျကနျြနေ
စီးပါလစေေ ခဈြသူရေ မသုတျလိုကျနဲ့ အပွာရောငျလေး ဒီမကျြရညျတှနေဲ့ တကယျလှနေ… ♪♪♪
အဲ့စာသားနားထောငျရငျး စဉျးစားတယျ .. ဒီလူက လူဆိုးကွီးမြားလား … ရကျစကျခကျြကလညျး ကမျးကုနျပဲ … ကောငျမလေး မကျြရညျကတြာကို တစိမျ့စိမျ့ထိုငျကွညျ့ပွီး အရသာခံနတေယျပေါ့
… အဲဒါနဲ့ ဆကျနားထောငျဖွဈတယျ …
♪♪♪ …. တခကျြတခကျြရှိုကျတဲ့မငျးငိုသံလေး ညသနျးကောငျတေးတဈပုဒျလိုပဲလေ
ယဲ့ယဲ့ပွုံးတဲ့ မငျးရဲ့မကျြနှာမွငျတော့ အလှပနျးခြီတဈခပျြအလား ထငျစရာပေ
စီးပါလစေေ ခဈြသူရေ မသုတျလိုကျနဲ့ အပွာရောငျလေး ဒီမကျြရညျတှနေဲ့ တကယျလှနေ …. ♪♪♪
ဟငျ … ယဲ့ယဲ့ပွုံးသတဲ့ … ငိုနရေငျးက ဘာလို့ထပွုံးရတာလဲ … နှိပျစကျလှနျလို့ ကွောကျပွီးရူးမြားသှားလသေလားပဲ … အဲထားပါတော့လေ … ဆကျနားထောငျတယျ …
♪♪♪ … အပွာရောငျလေး အခဈြမကျြရညျ အပွာရောငျမကျြရညျ အခဈြသကျသေ
စိုခှငျ့ရှိသူသာ စိုစမေယျ စိုစမေယျ
ပေါက်ခဝဿန မိုးလိုပွောတာ ဒါပဲဖွဈမယျထငျရဲ့ စိတျမှာစှဲနေ
လိုကျလြောခွငျးရဲ့အဆုံးစှနျးရောကျတဲ့ ခဏလေး တသကျမှာတဈခါပဲ ကွုံမယျလေ
စီးပါလစေေ ခဈြသူရေ မသုတျလိုကျနဲ့ အပွာရောငျလေး ဒီမကျြရညျတှနေဲ့ ယဉျလို့နေ …. ♪♪♪
ငငျ့ .. ပေါကျကရ မိုးတှဘောတှပေါ ပါလာပွီ .. လိုကျမမီတော့ဘူး .. ဖဖေကေို့ မေးကွညျ့တော့လညျး ရယျနတေယျ .. အဲလိုနဲ့ ဘာမှနျးမသိတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဆိုပွီး စိတျထဲမှာ ခုလုခုလုနဲ့
အဲလိုနဲ့ တက်ကသိုလျတကျတော့ အဆောငျက ဦးလေးကွီး အဲဒီသီခငျြးဆိုနသေံကွားလို့ ထပျမေးကွညျ့ဖွဈတယျ … ဦးလေးကွီးက ရယျကြဲကြဲဖွဈသှားတယျ …
– မငျးကွားဖူးမှာပေါ့ .. အပွာကားတို့ အပွာစာအုပျတို့ …. အဲဒီအပွာရဲ့အဓိပ်ပါယျကို သိတယျမဟုတျလား …
– ဟုတျ .. ဟိုဟာ .. လူကွီးကိစ်စ
– အေး .. ဒီသီခငျြးက အဲဒီကိစ်စပဲကှ … ကောငျမလေးရဲ့ ပထမဆုံးညမို့ ကတြဲ့မကျြရညျလေ .. အပွာရောငျမကျြရညျလို့ တငျစားထားတာ …
– သွျော ….
– ဒါနဲ့ ပေါကျကရမိုးဆိုတာက …
– ပေါက်ခရဝဿမိုးပါကှာ … အဲဒါက ဘုရားရှငျလကျထကျက တနျခိုးတျောနဲ့ ရှာပေးတဲ့ စိုစလေိုသူစိုပွီး မစိုစခေငျြတဲ့လူ မစိုတဲ့ မိုးကိုပွောတာ …
အဲလိုနဲ့ ကြှနျတျော အဲဒီသီခငျြးကို ပွနျနားထောငျကွညျ့တယျ … လခှမျး .. ရေးခကျြက အရမျးခြီးကြူးဖို့ကောငျးတယျဗြာ … အဓိပ်ပါယျသိမှ ပိုပွီးသဘောကသြှားတယျ … ဖှဲ့နှဲ့တတျပုံမြား …
နောကျမှ ဆရာစိုငျးခမျးလိတျရေးတာ ဆိုတာ သိရတယျ … စာသားတှကေ ခဈြစရာလေးဗြာ … ♪♪♪ လိုကလြောခွငျးရဲ့ အဆုံးစှနျရောကျတဲ့တခဏလေး .. တဈသကျမှာတဈခါပဲကွုံမယျလေ ♪♪♪ .. တဲ့ … ပေါက်ခရဝဿမိုး ဆိုတဲ့ တငျစားခကျြလေးကိုလညျး သဘောကမြိတယျ … မိနျးကလေးစိုစလေိုသူအတှကျ မိုးပေါ့ … နောကျပွီး စိတျကူးထဲက လူယုတျမာကွီးလညျး ပြောကျသှားတယျ … ပထမဆုံးညမို့ ငိုနတေဲ့ ခဈြသူလေးကို တစိမျ့စိမျနဲ့ ကွညျ့ရငျး ခဈြမဝတဲ့ ယောကျြားလေးတဈဦးဆိုတာပဲ စိတျထဲပျေါလာတယျ … အဲ … သီခငျြးဆုံးတော့ ပထမဆုံးဝငျလာတဲ့အတှေးက ၀မျးနညျးစရာပဲ .. ဆရာစိုငျးခမျးလိတျရေးတုနျးက အပွာရောငျမကျြရညျဟာ ခုခတျေမှာ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ တှေးလိုကျမိလို့ပါ ..
အသက်အရွယ်ကြောင့်ထင်တယ် ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာထက် ဘယ်လောက် နားလည်ပေးမလဲ ဆိုတာကို ပိုတွေးတတ်လာတယ်။
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်ကိုလဲ မယူနိုင်ပါဘူး အတူတူမတောင်းစားနိုင်လို့ပါ
​ယောက်ျား​တွေက ချစ်​တယ်​လို့ စ​ပြော​ပေမဲ့ အ​ပြောခံရတဲ့ မိန်းမ​တွေကပဲ တသက်​လုံး ဆက်​ချစ်​ကြရတယ်​
ဘဏ်တွင်ငွေလာအပ်သည့် သူတောင်းစားတဦးကို ဘဏ်ဝန်ထမ်းက ကန်ချ
ကြည့်ရှုသူတိုင်းကို ကြက်သီးထစေခဲ့တဲ့ သဘာဝလွန်ထိတ်လန့်စရာဓာတ်ပုံများ